Lionel Messi: Inaan Garaacno Real Madrid Waa Waxa Ugu Quruxda Badan. - jornalizem
Lionel Messi: Inaan Garaacno Real Madrid Waa Waxa Ugu Quruxda Badan.
Lionel Messi ayaa wareysi dheer oo uu siiyay jariirada Isbaanishka ee El Pais waxa uu kaga hadlay arimo badan oo quseeya xiddignimadiisa, kooxda Barcelona iyo weli kulanka ay la ciyaarayaan Real Madrid ee loo yaqaano El Clasico.
Iyadoo 7da bishaan October ay labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid ay geesaha isku gelin doonaan Camp Nou kulanka El Clasico ee ugu soo horeeya La Liga ayaa Messi uu sheegay inay tahay waxa ugu quruxda badan marka ay ka badiyaan Real.
“Waxaan xusuustaa dhamaan kulamada aan ka badinay Madrid oo ah koox fantastik ah. Waa waxa ugu quruxda badan sababtoo ah xaalad gaar ah oo muhim ah” ayuu yiri Messi.
Messi ayaa sidoo kale ka hadlay inuu nasiib ku leeyahay inuu u ciyaaro kooxdaan Barcelona oo haatan dad badan ay u texgeliyaan kooxdii ugu fiicneyd ee caalamka soo marta.
“Nasiibkeyga ugu weyn waxa uu ahaa inaan u ciyaaro kooxda Barcelona, oo ah koox ay ka buuxaan ciyaaryahano waa weyn. Kooxdaan waa kooxdii taariikhda gashay sababtoo ah wax walba oo ay ku guuleysatay. Kooxda ayaa iga dhigtay mid ka fiican sidii hore. Hadii aan caawinaad ka heli laheyn asxaabteyda kooxda, waxba ma aanan ahaan laheyn, waxbana kuma guuleysan laheyn,” ayuu hadalkiisa raaciyay xiddiga reer Argentina.
Messi ayaa intaa ku daray inuu ka jecel yahay in kooxda ay guuleysato halkii uu isaga abaalmarin shaqsi ah ku guuleysan lahaa.
“Waxaan aad u daneyaa inaan noqdo shaqsi fiican halkii aan ka noqon lahaa xiddiga adduunka ugu fiican. Waxaan rajeynayaa marka aan ciyaaraha ka fariisto inay dadka igu xusuusan doonaan inaan ahaa nin fiican. Waa jeclahay inaan goolal dhaliyo, lakiin sidoo kale waxaan jeclahay inaan saaxiibo ku dhex yeesho dadka aan la ciyaarayo.
“Ma jecli inaan sina u guuldareysto, waxaan isku dayaa inaan kooxda ka caawiyo inay badiso. Waxaan mar walba iraahdaa: Waxaan garoonka galaa anigoo ka fekeraya inaan guul gaarno ee uma galo anigoo ka fekeraya inaan goolal badan dhaliyo.”